भार्गवकोे कात्तिक २४ बाट १०ः८ हकप्रद शेयर निष्कासन | गृहपृष्ठ
Home लगानी भार्गवकोे कात्तिक २४ बाट १०ः८ हकप्रद शेयर निष्कासन
on: १३ पुष २०७४, बिहीबार १४:२६ लगानी
भार्गवकोे कात्तिक २४ बाट १०ः८ हकप्रद शेयर निष्कासन
कात्तिक ८, काठमाडौं (अस) । भार्गव विकास बैङ्क लिमिटेडले १० बराबर ८ (१०ः८) अनुपातमा कात्तिक २४ गतेदेखि मङ्सिर २८ गतेसम्म हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दैछ । बैङ्कको शेयरधनीका लागि प्रति शेयर एक सय अङ्कित दरको २१ लाख १२ हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
बैङ्कको आगामी कात्तिक १४ गतेसम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनी हुनाले हकप्रद शेयरमा खरीदको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद शेयर खरीदका लागि बैङ्कको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
हकप्रद शेयर निष्कासनपछि बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ४७ करोड ५२ लाख पुग्नेछ । त्यसैगरी, बैङ्कको प्रक्षपित वित्तीय विवरण अनुसार चुक्तापूँजी रू. ५० करोड १६ लाख र नाफा रू. ७ करोड ८४ लाख पुग्ने प्रक्षपण गरिएको छ । भार्गव विकास बैङ्कको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार रू.३ करोड ५१ लाख नाफा कमाएको छ । सञ्चालन नाफा र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफा बढेको हो । हाल बैङ्कको चुक्तापूँजी रू.२६ करोड ४० लाख रहेको छ ।
भार्गव विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २४ पुस २०७५)
२४ पुष २०७५, मंगलवार ०८:२३
भार्गव विकास बैङ्कको मूल्य समायोजन
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार १२:२३
भार्गव विकास बैङ्क लिमिटेड : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, १५ असोज २०७५)
१५ आश्विन २०७५, सोमबार ०७:५२
भार्गव विकासको दशौं वार्षिक साधारण सभा
७ आश्विन २०७५, आईतवार १२:४५